petrolium price hike(petrolium price hike) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ बढ्यो, प्रतिलिटर कति?
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समायोजन गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ अनुसार निगमले साबिकको पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु. २ ले वृद्धि गरी मूल्य समायोजन गरेको हो । निगमका अनुसार बुधबार...
काठमाण्डौ । साउदी अरबका तेल प्रशोधनस्थलमा दुईवटा आक्रमण भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चार महिनामा सबैभन्दा उच्च भएको छ। शनिवार ती आक्रमण भएपछि साउदी अरबले तेल र ग्यासको उत्पादनमा कटौती गरेको थियो। त्यसबाट विश्वभरि हुने आपूर्ति पाँच प्रतिशतले घटेको छ। बीबीसीका अनुसार व्यापार सुरु हुँदा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य १९% ले वृद्धि भई...